IShedi yokucwenga yeenkomo - I-Airbnb
IShedi yokucwenga yeenkomo
Uvimba sinombuki zindwendwe onguMark/Hilary
Ishedi yethu yeNkomo ecwebezelayo yohlukile kwaye inqabile. Ukuba ujonge ukubaleka eluxolweni nasekuzoleni kweendawo eziphakamileyo ungajongi phambili. I-Cow Shed ifake ikhitshi, ibhedi ephindwe kabini kunye nesitovu esibaswa ngamaplanga, inegumbi leshawari entsha kunye nezixhobo zangasese ngaphandle kwesakhiwo. Ilungele izibini ezifuna into eyahlukileyo.
I-Cow Shed ingonwatyelwa nanini na enyakeni, njengoko ifudunyezwa ngesitovu samaplanga okanye izifudumezi zombane ukuze ungagodoli.
Molo apho sicela ukuba iindwendwe zisebenzise kuphela umnyango owabelwe kwi-patio njengoko inika iindwendwe kunye nathi ubumfihlo. Kukho indlela yabucala ezakukhokelela ngasemva kweNdawo yeNkomo.
Ucango olukhulu oluMthubi lolokuphuma ngexesha likaxakeka kuphela
Apho iShedi yeNkomo ibekwe khona ikulungele ukubaleka nje ijonge elwandle apho unemibono emangalisayo. Izikhephe ezinkulu zokuloba kunye neenqanawe zeCruise zidlula ehlotyeni nasebusika kunye nesikhephe esihamba ngeeseyile ngamaxesha athile. Kukho iindawo ezintle onokuya kuloba ukuba ngumdla wakho lowo kunye nokuhamba okumangalisayo ukusuka kwinduli ehambele phambili ukuya kuhambo lokuphumla oluthatha indawo. Ukuba ukwindawo yomnenga okanye ihlengesi ke kukho indawo entle yokwenza oku kufutshane neStoer Light House oku kumgama oziikhilomitha ezi-4 ukusuka kwiShedi yeNkomo.
Umbuki zindwendwe ngu- Mark/Hilary
Silusapho oluncinci olusebenzayo kwaye sihlala kufutshane nepropathi nomyeni wam kunye nam malunga nexesha elininzi ukuba kuyimfuneko. Umyeni wam wazalelwa apha kwaye unolwazi oluhle lwendawo kunye neendawo zokuzibona kunye nezinto ekufuneka zenziwe xa ufuna iingcebiso malunga noku.
Silusapho oluncinci olusebenzayo kwaye sihlala kufutshane nepropathi nomyeni wam kunye nam malunga nexesha elininzi ukuba kuyimfuneko. Umyeni wam wazalelwa apha kwaye unolwazi oluh…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lochinver